Ivano-Frankovsk - Study in Ukraine. Xarunta Admission Yukreeniyaan
Ivano-Frankivsk, is the capital city of the Ivano-Frankivsk Oblast which lies to the west in Ukraine. Waa magaalo yar oo leh dadka ka mid ah si qallafsan 205,000 dadka. size ee magaalada kaliya ku darayaa in ay soo jiidashada.
Ivano-Frankivsk nolosha bilaabay inuu magangal yahay oo la dhisay in ay ka soo noqnoqda jabsata Tatar ilaaliyo commonwealth Polish-ka Lithuanian. qalcaddayda waxa uu ahaa guul weyn, waxa aan ahaa muddo dheer ka hor magaalada-qalcaddayda bilaabeen inay soo baxaan hoos ammaanka ay bixiyaan qalcado this. Waxaa markii hore ku xusan taariikhda ee 1662 markii la siiyo xuquuqda Magdeburg. Magaalada on tageen si ay u noolaadaan oo keliya ma aha weeraro Tatar laakiin sidoo kale kuwa ku riixdaan ku dul by duuleen ciidamada Turkish iyo Ruush. Renaissance waxay ahayd muddo of koritaanka ballaaran iyo dib u dhiska, taas oo keeni in ay noqoto magaalo xoogaa ka badan picturesque. Dhab ahaantii waxa ay ka heshay ku nick-magaca 'Leopolis yar’ - Leopolis isagoo magac Laatiin ah ee Lviv. Waxa kale oo joogay oo ku saabsan waqtigan in Ivano-Frankivsk, Ukraine, noqday xarun muhiim u ah dhaqanka Armenian.
Ka dib markii Poland waxaa kor kala ah 'qoruhu ee Poland', Ivano-Frankivsk xukumayey Austria yimid ka hor inta hoos domain ee maamul goboleedka Kingdom of Galicia iyo Lodomeria. 1919 ay ahayd waqti qasan for Ivano-Frankivsk siday ahayd mawduuca socdeen badan Polish-Yukreeniyaan. Waxaa ugu danbeyn halaagsameen sida Polish Republic Labaad, adeegaya sida caasimada Stanislawow Voivodship. Ugu dambayntii, in 1939 waxaa la soo galeen ciidamada Jarmal iyo Soviet oo waxaa ku lifaaqan sii buurayn ee Ukrainian ah. Inta badan dadka Yuhuudda la dilay lagu jiro shaqo ee Nazi, taas oo ahayd muddo aad u murugo badan taariikhda magaalada.
Ugu dambayntii, in 1962, magaca beddelmay in Ivano-Frankivsk ka dib qoraaga Yukreeniyaan Ivan Franko. 1990 The Arkay mid ka mid ah xarumaha dhaqdhaqaaqa xornimada Yukreeniyaan noqday. Maanta magaalada u taagan kor u kibir in ay xaq u gaarka ah. Waa magaalo soo jiidasho leh iyadoo labada taariikh guul iyo murugo oo xiiso leh si ay u sahamiyaan waa in aad haysato waqti ku. Waa maxay sababta aan booqan waqtiga soo socda Ivano-Frankivsk aad ku sugan tahay Ukraine iyo aad u ogaato waxa uu leeyahay in ay bixiyaan naftaada?